Kutsvaga nzira dzekuita mari yako سایت وردپرس؟ Kune vazhinji vepanzvimbo yekutsvaga، uchishandisa maitiro akadai Google AdSense inzira yakakurumbira yekuwana mari isina kufanira. Icho chikwata chekutengesa chinogona nyore nyore kusanganisa mune chero nzvimbo yepaiti – ingava bhuku rako pachako kana e-commerce store.
3 تبلیغات Kuumba neAdSense
4 صفحه آگهی Kuisa در وردپرس
5 مازانو اکوودزرا
Google AdSense inoshandisa mufananidzo weDain-Per-Click ، ​​izvo zvinoreva kuti iwe unobhadhara mari yakawanda apo chero vese vashandura pazvitsva zvesaiti yako. Iko mari yekutengesa inobva kune zvakasiyana-siyana zvakadai se امتیاز کیفیت اوه رتبه تبلیغات.
Kana ikashandiswa ، Google AdSense inoshanda nekuratidzira zviziviso munzvimbo nhatu dzinokosha: بنر بالا ، نوار کناری, اوه موکاتی ماکو kugutsikana. Sezvo muridzi wepaiti، une sarudzo yekugadzirisa kuti zviziviso zvingaratidze uye کوپی.
Kuwedzera Google AdSense kune yako سایت وردپرس ، chinhu chekutanga chaunofanira kuita ndechokunyoresa kwenyaya itva. Unogonawo kushandisa kero yako yeGoogle iripo kuti utange.
نشانی اینترنتی آدرس اینترنتی Enderera pamwe nekupinda yako webhusaiti. Zvakare، usakanganwa kusarudza mutauro unoshandiswa nevateereri vako zvakanyanya. Enderera pamwe neasara rese rekunyoresa maitiro nekutevera pane-skrini mirayiridzo.
Ramba uchifunga kuti Google inoda kuongorora shanduro yako yeAdSense usati watanga kuratidza zvizivo panzvimbo yako. ایمیل Chimirira yavo yekusimbisa kuti uende. Izvi zvingatora chero kupi zvako kubva maawa 6-8. Kana kese chibvumirano chako chakabvumirwa، iwe zvino unogona kupinda iwe kuAcense yako yeAdSense uye uchitanga kugadzira zvivako.
تبلیغات Kuumba neAdSense
Kuti ugadzire matandesi، tumira kune داشبورد AdSense uye enda kuZvangu Zvangu> Yechigariro chechigadzirwa chitsva.
Mune peji itva yezvitsvakurudzo، unogona kuchinja kuonekwa kwechirongwa nekufungidzira ukuru، rudzi، uye chimiro. Ngwarira kuvepo kwekugara uye urongwa urongwa hwewebsite yako. Kunyangwe iwe uchida kuwedzera kuonekwa kwezviziviso izvi، iwe haugone kuita kuti zvivhiringidze zvakaitika kune vashanyi vako. من unogona kutarisa muenzaniso unoratidza zviratidzo kuona kuti umwe wekutsvaga kwekutsvaga anotarisa sei mune peji chaiyo.
Tora kuti iwe unogonawo kutaura mabhengi ekuchengetedza, iyo inongoratidza chete kana Google Google isingagoni kuwana chero marangaridzo akakodzera kushumira. Nzira dzekambo، kune rumwe rutivi، inokubvumira kutevera zviyero zvakashambadzirwa zvikwata mumapoka. Semuenzaniso، unogona kugadzira mararamiro akasiyana-siyana emitambo yebato rako rebato rekutsvaga uye mabhendi ekutsvakurudza kuti aone kuti kuiswa kupi kunoita zviri nani.
mushure mekusika chikwata kwekutanga، enda mberi uye chengeta "Chengetedza uye tora kadhi" پس پرجی Mushure mezvo، iwe unokwanisa ikozvino kukopa kadhi yako yepikisi uye urichengetedze mumunyori wemashoko akadai seNepepadha. Kuita izvi kunoita kuti zvive nyore kwauri kuti ushandise kadhi yemadhorodhi munguva yemberi.
صفحه آگهی Kuisa در وردپرس
وب سایت پرس وب سایت اندا کونئواوا Kuti utange kuratidza zvivako panzvimbo yeWebsitePress> ابزارک ها بعد از ظهر "ابزارک های موجود," tsvaga sarudzo "ممبره" (Ratidza zvinyorwa kana HTML) ویجت uzvikweze muchikamu che.
Cherekedza kuti zvikamu zvepeji paunogona kusanganisira majeti zvakaenderana nemusoro wazvino webhusaiti yako. ویجت مسکونی mekudhonza iyowidget ، isa musoro uye unamatidza kodhi yedhodhi mumunda yakanyorwa se "زویری موکاتی". Dzvanya "چنگژزا" uye wagadzirira kuenda.
Kana uchida nzira yakakurumidza Yekushandisa AdSense yako panel وردپرس ، unogona kushandisa Aparg SmartAd:
چیپونیز چی Aparg SmartAd؟ افزونه مدیریت تبلیغات وردپرس Ndicho. Ndiyo chete yega yerudzi ine تبلیغ هوشمند کنترل iyo inoita kuti usvike kune vako vateereri. Iwe unogona kuve neyakazara kutonga pamusoro pezvishambiso zvinowoneka pawebsite yako. Iwe unogona kusarudza kodhi uye isa yako کد کوتاه کد Google AdSense kuburikidza nemishandirapamwe kuronga. Ipapo kushambadzira kunoratidza mune icho chikamu chewebhu peji iwe chaunoisa.
Dzidza kuA / B kuongorora nzira dzakasiyana dzekutambira. Hakusi kungoparadzanisa kuedza kuchengetedza nguva، zvinoita kuti zvive nyore kukwanisa kutengesa matanho ako kune zvikwereti zvakawanda. Iwe unogona zvakare A / B kuongorora Shoko rako Rose reShoko kuti aone chimiro chinotungamirira kune vazhinji vakashandurwa.
Iwe unogona kushandisa purogiramu yakafanana AdSanity kuti uchengete zviri nani matanho ako. Icho chinyararire che "روتاتور" chishandiso chinokubvumira kuti iwe ugadzire، purogiramu، uye kutarisa matanho kana mapoka emashamba ekutendeuka kukuru.
Maererano nehuwandu، huwandu hwezvakadhindwa 336 × 280، 728 × 90، uye 300 260 zvinonyatsokodzera zvikwangwani zvakawanda zvepanyoro. Nokuda kwemajaya، ukuru 320 × 100 yakawanikwa kuti inonyanya kubudirira. Zvose izvi zvinotsigirwa kuti ndezvenyanzvi dzakawanda dzinowanzobudirira zvichienderana neGoogle pachake zvakawanikwa.
Kutsvaga nzira dzekuita mari yako WordPress síða? Kune vazhinji vepanzvimbo yekutsvaga, uchishandisa maitiro akadai
אתר וורדפרס Kutsvaga nzira dzekuita mari yako? קונה vazhinji vepanzvimbo yekutsvaga, uchishandisa maitiro akadai
Kutsvaga nzira dzekuita mari yako stranica WordPress? Kune vazhinji vepanzvimbo yekutsvaga, uchishandisa maitiro akadai
Kutsvaga nzira dzekuita mari yako WordPress oldal? Kune vazhinji vepanzvimbo yekutsvaga, uchishandisa maitiro akadai
Kutsvaga nzira dzekuita mari yako WordPress -sivusto? Kune vazhinji vepanzvimbo yekutsvaga, uchishandisa maitiro akadai
WordPress- ის საიტებზე თუ გსურთ გამოიყენოთ თქვენი საიტი? Kune vazhinji vepanzvimbo yekutsvaga, uchishandisa maitiro
Kutsvaga nzira dzekuita mari yako WordPress síða? Kune vazhinji vepanzvimbo yekutsvaga, uchishandisa maitiro akadai Google AdSense inzira yakakurumbira yekuwana mari isina kufanira. Icho chikwata chekutengesa chinogona nyore nyore kusanganisa mune chero nzvimbo yepaiti – ingava bhuku rako pachako kana eCommerce verslun.
3 Kuumba auglýsingar neAdSense
4 Kuisa auglýsingaglugga WordPress
Google AdSense inoshandisa mufananidzo weDain-Per-Click, izvo zvinoreva kuti iwe unobhadhara mari yakawanda apo chero vese vashandura pazvitsva zvesaiti yako. Iko mari yekutengesa inobva kune zvakasiyana-siyana zvakadai se Gæðastig uye Auglýsingastaða.
Kana ikashandiswa, Google AdSense inoshanda nekuratidzira zviziviso munzvimbo nhatu dzinokosha: the topp borði, skenkur, uye mukati mako kugutsikana. Sezvo muridzi wepaiti, une sarudzo yekugadzirisa kuti zviziviso zvingaratidze uye kúpí.
Notaðu Google AdSense til að nota WordPress síðuna, chinhu chekutanga chaunofanira kuita ndechokunyoresa kwenyaya itsva. Unogonawo kushandisa kero yako yeGoogle iripo kuti utange.
Enderera pamwe nekunyoresa nekupinda yako webhusaiti URL. Zvakare, usakanganwa kusarudza mutauro unoshandiswa nevateereri vako zvakanyanya. Enderera pamwe neasara rese rekunyoresa maitiro nekutevera rude-skrini mirayiridzo.
Ramba uchifunga kuti Google inoda kuongorora shanduro yako yeAdSense usati watanga kuratidza zvizivo panzvimbo yako. Chimirira sendi tölvupóst með yavo yekusimbisa kuti uende. Izvi zvingatora chero kupi zvako kubva maawa 6-8. Kana kese chibvumirano chako chakabvumirwa, Iwe zvino unogona kupinda iwe kuAcense yako yeAdSense uye uchitanga kugadzira zvivako.
Kuumba auglýsingar neAdSense
Kuti ugadzire matandesi, tumira kune AdSense mælaborðið uye enda kuZvangu Zvangu> Yechigariro chechigadzirwa chitsva.
Mune peji itsva yezvitsvakurudzo, unogona kuchinja kuonekwa kwechirongwa nekufungidzira ukuru, rudzi, uye chimiro. Ngwarira kuvepo kwekugara uye urongwa urongwa hwewebsite yako. Kunyangwe iwe uchida kuwedzera kuonekwa kwezviziviso izvi, Iwe haugone kuita kuti zvivhiringidze zvakaitika kune vashanyi vako. Ég er unogona kutarisa muenzaniso unoratidza zviratidzo kuona kuti umwe wekutsvaga kwekutsvaga anotarisa sei mune peji chaiyo.
Mushure mekusika chikwata kwekutanga, enda mberi uye chengeta "Chengetedza uye tora kadhi" pasi peji. Mushure mezvo, ég er unokwanisa ikozvino kukopa kadhi yako yepikisi uye urichengetedze mumunyori wemashoko akadai seNepepadha. Kuita izvi kunoita kuti zvive nyore kwauri kuti ushandise kadhi yemadhorodhi munguva yemberi.
Kuisa auglýsingaglugga WordPress
Kuti utange kuratidza zvivako panzvimbo yeWebsitePress website, enda Kuonekwa> Búnaður. Pasi pe "Laus búnaður," tsvaga sarudzo "Mhemberero" (Þú getur notað HTML skjöl) Þú getur notað búnaðinn þinn.
Cherekedza kuti zvikamu zvepeji paunogona kusanganisira majeti zvakaenderana nemusoro wazvino webhusaiti yako. Mushure mekudhonza iyowidget búnaður, er musoro uye unamatidza kodhi yedhodhi mumunda yakanyorwa se "Zviri mukati". Dzvanya "Chengetedza" uye wagadzirira kuenda.
Kana uchida nzira yakakurumidza yekushandisa AdSense yako rúðan WordPress, unogona kushandisa Aparg SmartAd:
Chii chinonzi Aparg SmartAd? Ndicho WordPress auglýsingastjórnunarviðbætur. Ndiyo chete yega yerudzi ine snjall auglýsing stjórna iyo inoita kuti usvike kune vako vateereri. Iwe unogona kuve neyakazara kutonga pamusoro pezvishambiso zvinowoneka pawebsite yako. Þú ert að nota Google AdSense stuttan kóða kuburikidza nemishandirapamwe kuronga. Ipapo kushambadzira kunoratidza mune icho chikamu chewebhu peji iwe chaunoisa.
Dzidza kuA / B kuongorora nzira dzakasiyana dzekutambira. Hakusi kungoparadzanisa kuedza kuchengetedza nguva, zvinoita kuti zvive nyore kukwanisa kutengesa matanho ako kune zvikwereti zvakawanda. Iwe unogona zvakare A / B kuongorora Shoko rako hækkaði reShoko kuti aone chimiro chinotungamirira kune vazhinji vakashandurwa.
Iwe unogona kushandisa purogiramu yakafanana AdSanity kuti uchengete zviri nani matanho ako. Icho chinyararire che "snúningur" chishandiso chinokubvumira kuti iwe ugadzire, purogiramu, uye kutarisa matanho kana mapoka emashamba ekutendeuka kukuru.
Google AdSense inzira yakanakisisa yekutanga kuwana kubva kune yako yese yekuvaka-kushanda. Danho rinotevera nderokushandisa nzira dzinogona kukubatsira kuti uwedzere marwagwa uye mismunandi zvakanyanya kubva rúðan zvaunotarisa.
Kutsvaga nzira dzekuita mari yako سایت وردپرس؟ Kune vazhinji vepanzvimbo yekutsvaga، uchishandisa maitiro akadai
Integrazione Iifayile ze-Facebook ze-17 Kwi-WordPress